Madaxweynaha dalka kenya oo booqasho aan horay looshaacin ku yimid Degmada Dhoobleey ee gobolka jubada hOOSE | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynaha dalka kenya oo booqasho aan horay looshaacin ku yimid Degmada Dhoobleey...
Madaxweynaha dalka kenya oo booqasho aan horay looshaacin ku yimid Degmada Dhoobleey ee gobolka jubada hOOSE
Madaxweynaha dowladda Kenya oo xiran dharka ciidanka xoogga dalka Kenya ayaa booqday Degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada hoose ,halkaasoo saldhig ciidan ay ku leeyihiin ciidanka dowladda ee ka howlgallo Soomaaliya.
Ciidanka joogga degmada Dhoobley ayaa ka qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM .
Madaxweynaha dowladda Kenya ayaa u mahadceliyay ciidanka dowladda ee ku sugan Soomaaliya oo uu sheegay in ay Naftooda u hureen difaacda dalkooda Hooyo.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in booqashadiisa ay timid ka dib markii ciidanka dowladda Kenya ay ka hortageen Weeraro badan oo ay soo abaabuleen Shabaab oo lala damacsanaa dalka Kenya.
Uhuru Kenya ayaa sidoo kale xusay in ciidanka dowladda Kenya ay ka qeyb qaateen Xasiloonida Geeska Afrika ,isagoona ciidanka Kenya ee Joogga Soomaaliya ku tilmaamay Geesiyaal Naftood hurayaal ah.
Kenyatta ayaa Carabka ku adkeeyay in ciidanka dowladda Kenya waligood ay joogayaan Soomaaliya tan iyo inta Shacabka dowladda Kenya ay ka qabaan Cabsi Xarakada Al-Shabaab.
“Waxaana halkaan ka tagi doono markii dowladda Cusub Soomaaliya ay yeelato Ciidan Milatari oo xooggan oo Amniga dalka hanan kara, markaas ayaa dib ugu soo laaban doontaan Guryihiina” ayuu yiri Uhuru Kenyatta
AMISOM ayaa degmada Dhoobley ku leh Saldhig muhiim ah oo ay Mararka Qaar ka qaado Weerada lala beegsado Xarakada Al-Shabaab.
“ Difaacida dhulkeena Hooyo iyo sidoo kaleWaajibaadka Caalamiga ah ee Raadinta Nabad iyo Ammaan ayaan ku luminay noloshada Askar badan oo geesiyaal ah, taasi oo ah mid taariikhi ah oo aan la hilmaamin Karin oo dadka dhan aysan wada ogsooneyn ,laakiin waxaad ogataan in ay noqon doonta taariikh ay raaci doonaan Wiilasha iyo sidoo kale Gabdhaha reer Kenya ee dhalan doona” ayuu markale Yiri Kenyatta.
Tani ayaa ah Booqashadii ugu horeysay ee Madaxweynaha Kenya uu ku tago Xerada Ciidanka dowladda Kenya eek u taalla Koofurta Soomaaliya .
Tani ayaa waxaa loo arkaa in ay tahay mid dhiiiragelinaysa Ciidanka dowladda Kenya oo inta badan weeraro qorshaysan kala kulma Xarakada Al-Shabaab.
Al-Shabaab Weeraradii ay ku qaadeen Ciidanka dowladda Kenya waxaa ugu waaweyn ee Weerarkii degaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo oo lagu dilay tiro ku dhow 200 oo Askari iyo sidoo kale Weerarkii degaanka Kulbiyow oo lagu dilay ku dhawaad 50 Askari.